Wararkii ugu dambeeyay doorashada hoggaanka maamulka Hir-Shabelle | Warkii.com
Home warkii Wararkii ugu dambeeyay doorashada hoggaanka maamulka Hir-Shabelle
Doorashada hoggaanka maamulka Hir-Shabelle ayaa la filayaa iney qabsoonto maalinta Arbacada oo ku beegan 11-ka bisha November, waxaana ka jira halkaas guux ku saabsan arrimaha doorashooyinka.
Maalinkii labaad ayey socotaa is diiwaan galinta musharaxiinta iyadoo guddiga doorashooyinka maamulka Hir-Shabelle aysan wali soo saarin liiska musharaxiinta, balse maanta ayey ku egtahay waqtiga loo qabtay.
Ilow wareedyo ku dhaw guddiga ayaa Caasimadda Online u sheegay in kaliya hal musharax uu is diiwaangaliyay, balse la filaayo in musharaxiinta kale ay maanta is diiwaan galiyaan, waxaana la filayaa in musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ay noqon doonaan tiro kooban.
Sida ku cad jadwalka doorashada Hir-Shabelle oo ay soo saareen guddiga doorashooyinka, maalinta berito ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 10-ka Nofeembar, waxaa jirta qudbo jeedinta musharaxiinta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
Cali Guudlaawe Xuseen oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore Hir-Shabelle ayaa shalayto kusoo bandhigay magaalada Jowhar inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka, waxaana la sugayaa musharaxiin kale oo tartan la galay iyadoo warbaahinta ay durba sii fahamsan tahay inuu yahay shaqsiga ugu cad-cad.
Doorashada Hir-Shabelle ayey indhaha dhan kusii jeedaan iyadoo ay tahay caqabadda kaliya ee ku hor-gudban in la guda-galo doorashooyinka guud ee dalka, waxaana isha lagu hayaa qofka kusoo bixi doona inuu hogaamiyo, dadka siyaasadda ka hadlana waxey aaminsan yahiin in hogaanka maamulkaan uu saameyn ku yeelan karo doorashada guud ee dalka.
Previous articleMadaxweynaha Tigrayga oo hadal lama filaan ah kasoo saaray dagaalka
Next articleShabakad ka tirsan Al-Shabaab & sarkaakiil oo lagu qabtay Gaalkacyo
damada ammaanka Soomaaliya ayaa wadayaasha gaadiidka Taksiga ee ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho u diiday in ay tagaan albaabka garoonka, si ay...